Wararka Ciyaaraha ku saabsan - BBC News Somali
Wararka Ciyaaraha ku saabsan
8 Oktoobar 2015
Image caption Kooxda kubada cagta ee Suudaanta Koonfureed.
Magaala madaxda South Sudan ee Juba waxaa maanta dib uga bilaabanaysa ciyaartii u dhexaysay South Sudan iyo Mauritania oo shalay la joojiyay markii ay socotay muddo toban daqiiqo ah roob xoog leh oo halkaas ka da'ay awgeed.
Ciyaartan oo ka mid ah kulammada loogu soo baxayo is-reebreebka koobka adduunka waa markii ugu horreysay ee South Sudan ay ka qayb gasho tartankan.
Ciyaarta markii la joojiyay waxaa la kala marayay 1-1 gool, waxaana dheelayaa 80 daqiiqo oo ka harsan waqtigii caadiga ee kubbadda cagta.
Dhinaca kale, Fifa ayaa dib u dhigtay ciyaar loogu soo baxayo koobka adduunka oo toddobaadka dambe dhex mari lahayd kooxo ka kala socda Falastiiniin iyo Saudi Arabia kaddib markii uu muran dhexmaray labada dal ku saabsan in ciyaarta lagu qabto Daanta Galbeed iyo in kale.
Saudi-gu waxay sheegayaan inay jiraan xaalado aan caadi ahayn taas oo macnaheedu yahay in ciyaarta loo wareejiyo waddan 3aad oo dhexdhexaad ah, laakiin Falastiiniyiintu waxay sheegayaan in laga qaadayo xaqii ay u lahaayeen inay ciyaarta gurigooda ku dheelaan.
Fifa ayaa laga rabaa inay arrinta go'aan ka gaarto.